घर युरोपियन स्टार Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य
LB पूर्ण स्टोरीज को मिडफील्ड इन्जिन को सर्वश्रेष्ठ उपनाम द्वारा ज्ञात गर्दछ; 'बेकोको'। हाम्रो Tiemoue Bakayoko बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्याङ्कहरू तपाईंको बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को पूर्ण खाता ल्याउन। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उहाँको बारेमा धेरै बन्द-पिच तथ्यहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ। अब थप adieu बिना, सुरु हुन्छ।
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य: बाल्यकाल
बेकायको पेरिसमा 17 अगस्ट 1994 मा जन्मिएका आमाबाबुहरूलाई आइवरी कोस्टबाट फ्रान्सको राजधानीमा राम्रो जीवन बनाउनको लागि उत्प्रेरित गरिएको थियो।
तिनका धेरै कालो जोडीहरू जस्तै, तिनी फ्रांसीसी-इभोरियन विरासतमा छन्। बढ्दै गर्दा, बारबेजको पड़ोसीमा बाँचेका छन् जुन अफ़्रीकी मूल को एक ठूलो संख्या छ। यो पेरिसमा एक छिमेकी ऐतिहासिक रूपमा अफ्रिकी आप्रवासनबाट कालो मान्छेहरूको ठूलो ठूलो संख्याको लागि जानिन्छ।
बच्चाको रूपमा तिमोउको बेकेकोको उनको आमाबाबुले सबै प्रकारका कामहरू देखाए menial रोजगारीमा खाना खानुहोस् र आइवरी कोस्टमा विस्तारित परिवारहरूलाई मोनिज पठाउनुहोस्। त्यस अवधिमा प्रायः म्यानुअल कामहरू कालो अफ्रिकाहरू, अझ धेरै शिक्षित व्यक्तिहरू द्वारा पीछा गरे। स्कूल जाँदै जवान छोरीको लागि प्राथमिकता थिएन।
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य: विश्व कप द्वारा प्रेरित
जस्तै Sadio मनी, उनी फ्रान्स 1998 विश्व कप मार्फत फुटबलमा प्रेरित भए। उनले पहिलो पटक सेनेगललाई एक छिमेकीलाई आफ्नो मातृभूमि (आइवरी कोस्ट) ओपनरमा फ्रान्स फर्केर हेर्दै र टूर्नामेंटको महिमा कुरा गर्न फ्रान्स हेर्दै हेर्दै हेर्दै थिए।
उसको अनुसार, "म टोलीमा उल्लेखनीय काले फ्रांसीसी खेलाडीहरूको बहादुरीबाट प्रेरित भएको थियो। म एक व्यक्ति थिए जसले ठूलो रक्षक र रक्षात्मक midfielders लाई प्रेम गर्थे। पैट्रिक वेइरा, ललिला थुरम र मार्सेल डिसेलीको मनपर्ने मेरो मनपर्ने थियो। तिनीहरूको प्रदर्शनले मेरो लागि क्यारियर भागलाई बेवास्ता गर्यो। तथापि, म क्लाउड मकलेले उल्लेख गर्न असफल भएको छैन जसले म बन्यो को आधार राख्दछ। "
थुप्रै अन्य कालो बच्चाहरू जस्तै, शिक्षा बेकेकोको लागि स्किप गरिएको थियो, उनी फ्रान्स 1998 विश्व कप टूर्नामेंटको तुरुन्तै फुटबलसँग खेल्न थाले। तिनका आमाबाबुले आफ्ना बुबालाई बुझ्नुभयो र उपयुक्त सुरू गर्न आवश्यक सबै सहयोग प्रदान गर्नुभयो। तिनीहरूले उनलाई फुटबल अकादमीमा दर्ता गरे (Le club de football de PARIS 15)5को उमेर मा।
आफ्नो अकादमी स्तरमा फुटबल खेल्दा बेकेयोकोले सबैभन्दा ठूलो स्तरको प्रतिभा देखाए। त्यो अकादमी मा औसत बच्चा भन्दा माथि थियो र केहि बिंदु मा सर्वश्रेष्ठ बच्चा फुटबलर को रूप मा मुकुट थियो। पेरिस 15 ले उसलाई आफ्नो4वर्ष को लागि (9 उमेर सम्म) को लागि राख्नु अघि उनको आमाबाबु को नाम ले एक बेहतर अकादमी मा स्विच शुरू गर्न को लागी -CA पेरिस Charenton। उनले अर्को कदम चाल्न अघि मात्र Charenton मा एक वर्ष लागे Montrogue FC FCNUMX। यस क्लबमा, उनले एक अपरिहार्य समस्या, एक पानीकोट भेट्छन्।
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य:पीडाहरू
मोंटोगुएसी एफसी 10 को लागी खेल्ने क्रममा एक युवा खेलाडी (उमेर 92) को रूपमा, बेकाकोको के भन्नु भएकोले एक टुक्रा टाढाको सामना गर्यो 'एक गंदा चुनौती' एक विरोधीबाट। चोटको गम्भीरताले उनीहरूको जवान क्यारियरमा लामो समयसम्म रोकियो।
"केही समयमा मैले मेरो जवान क्यारियरलाई अचानक अन्त्यमा हेरेँ"। यो मेरो लागि गहन दुखाइको अवधि थियो। मेरो पुन: प्राप्ति प्रक्रिया ढिलो भयो र यसले मलाई3वर्षसम्म फुटबल नगरी बिना खर्च गर्यो " बेकेयोको भन्छन्।
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य:तिरस्कार
वर्ष 2008 मा, विषैले ह्युमस फ्रिक्वेन्सीबाट पूर्ण रिकभरीको पुष्टि भयो। उहाँ मात्र 13 वर्ष मात्र थिए। उनले आफ्नो क्यारियरमा छोडेका छनौट गर्नु अघि पूर्ण रिकभरीको पुष्टि गर्न केही हप्ताको लागि पर्खथ्यो। दुर्भाग्यवश फारम हानिको कारणले कुनै क्लबले उनलाई उठाएको छैन। उनले आफ्नो फुटबल अकादमीहरू पनि अस्वीकार गरे।
यो रेन्स मा फुटबल अकादमी थियो कि अन्ततः उनलाई प्रबंधन द्वारा धेरै विचारहरु पछि उनको रूप प्राप्त गर्न को अवसर दिए। तिनीहरूले तथ्यलाई सोधे कि तिनी एक पटक उनीहरूको पुरानो क्लबमा धेरै उच्च दर्जा दिइएको थियो। यो 2009 मा भयो जब त्यो केवल 14 वर्ष उमेर थियो।
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य:मकलेलेका पछाडि पछ्याउँदै
मोनाकोमा उनको पहिलो दुई सीजनहरू पछ्याउँदै, जसमा उहाँले 31 लिग्यु 1 प्रदर्शन गर्नुभयो, बेकेकोको आफ्नो सम्भावना पूरा गर्न आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न निर्णय गर्यो। सबै उनको संरक्षक, क्लाउड मकलेले को लागि धन्यवाद जुन जनवरी 2016 मा मोनोको टेक्निकल निदेशक को रूपमा नियुक्त गरिएको थियो।
मकलेले देखि बेकेयोकोको भूमिका
"मक्लेलेले मलाई सहयोग गरे। उहाँ मोनाकोमा आइपुग्दा म धेरै, धेरै राम्रो खेलाडी थिएन, तर मसँग उनको धेरै चर्चा थियो। उनले मलाई धेरै सल्लाह दिए र मलाई सिखाए कसरी फुटबलको शैली अझ बढी खेल्छु। उहाँले मलाई मलाई थप प्रशिक्षण सहायताको लागि कल गर्न पनि अनुमति दिनुभयो। "
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य:द्रुत परिपक्वता
उनीहरूले पिचबाट आफैलाई हेरचाह गर्न सक्नु अघि लामो समय लागेन। पिचमा, उहाँले एक्सएनएक्सएक्स / एक्सएनएनएक्सएक्स सिजनमा लीग 1 शीर्षकको क्लबलाई क्लब बनाउन मद्दत गर्दै मोनाकोको लागि नियमित स्टार्टरटर हुनुभयो। उनीहरूले लगातार प्रदर्शनको साथ मोनको टोलीको एक महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेन, उनीहरूको चोट लागेको थियो र प्रशिक्षणको बेला उनको आवेदन अब आलोचना गरिएको थिएन।
बेकेयाको परिपक्वता टाइमलाइन
आज, बेकायोको अन्तमा परिपक्व भएको छ। उहाँले मध्य मिडफील्डमा राम्रो प्रयोग गर्न शक्ति र दृष्टिको संयोजन राख्नु भएको छ।
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य:बजाउने शैली
बेकिओको तुलना गरिएको छ यया टूर गतिको उनको बलियो आवरण गुणको कारण, खेलको बुद्धिमानी पढ्ने, गुप्त र डेलिबलिङ पास गर्ने र पूरा टेललिंग गर्ने क्षमताको क्षमता। उनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण उनको शारीरिकता र एथलेटिकवाद हो।
बायोको स्टाइलको प्ले
उहाँ रक्षात्मक मिडफील्ड भूमिकामा एक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। आक्रमणहरू तोड्न र अग्लो ड्राइभिङ चलाउने उनको क्षमता थियो, केवल केहि दुई खेलाडीहरू (गेबी र डैनी पिटर वाटर) 2016 / 2017 चैंपियन लीग सीजनमा अधिक हासिल गर्यो।
Bakayoko Midfield दर्जा
बेकोकोको मोनकोमा मानिन्छ, लियोनार्डो जर्डिमएक पटक यसो भने: "उनले धेरै बल जिते, टीममा सन्तुलन ल्याउँछ। उनले बल राम्रो पारेर आफ्नो दुलही जीत्यो। यो बेकिओको भूमिका हो। उहाँ एक पूर्ण मिडफिल्डर हुनुहुन्छ, एक महत्त्वपूर्ण एथलेटिक उपस्थिति हो, उहाँ पुनःप्राप्त र निर्णायक लक्ष्यहरूको स्कोरमा राम्रो हुनुहुन्छ। "
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य:कालो नाइट
उहाँका सबै गुणहरू छन्, बायोकोको कडाता र रगडपन भनेको त्यहाँ ठीक छ र तिनको बिक्री पोइन्ट हो।
धेरै मान्छेले सोध्थे किन उनी एक मुखौटा लगाउँछन्? ... अब हामी तपाईंलाई जवाफ दिन्छौं।
एकपटक बेक्यकोको जर्नलस विरुद्ध मोनको च्याम्पियंस लीगमा अर्का-फाइनलमा प्रवेश गरेकी थिइन्।
उनीहरूलाई इटालियनहरूको विरुद्ध सुरू गर्न नसक्ने अनुमति दिएनन् र एक विशेष सुरक्षात्मक कालो अनुहार मुखौटा पहने निर्णय गरे जसले उनलाई एक मार्वल सुपर हारोको हावा र शीर्षकको ढोका खोलेका थिए। 'डार्क नाइट'.
बेकायको अझै आफ्नो पहिरिएको बायाँ घुँडामा दुख्छ। माथि लिखित रूपमा, उनले एक लामो जादूलाई एक जवानको रूपमा तोक्ने टिपको साथ छेडेको थियो।
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य:गुलाबीबाट कालोबाट (भाग 2)
प्रभावकारी, बेकायोको आफ्नो जीवनशैलीमा थुप्रै परिवर्तनहरू अनुभव गरेका थिए, पहिलेको फ्रान्सेली अन्तर्राष्ट्रिय क्लाउड मकलेलेसँग उनको मुठभेड पछि। उनले ड्यापर हेर्दा सामान्यतया परिवर्तन गरे।
आज, उहाँले पिच र बन्द दुवै छाप छ। एक अस्थायी 1.84m, त्यो कुनै सिकुना बैंगनी छैन जब यो आफ्नो उपस्थिति आउँछ, एक दिन उनको बाल गुलाबी रंगाई, अर्को गोरा।
Bakayoko हेयर शैलियां
जब उहाँले मोनकोमा 2014 मा आइपुग्नुभयो त्यो एक गुलाबी पोर्श केयेन को पहिया पछि लक्जरी villa को भागबाट उदघाटन गर्न सकिन्छ।
बेकायको एकपटक उनको कारको सबै रंग गुलाबीबाट कालो परिवर्तन भयो। यसबाहेक, तिनले बक्सिङ सुरु गरे र आफ्नो आहारलाई पनि परिवर्तन गरे र तिनलाई बलियो बनायो।
तर व्यवहारमा एक समुद्र परिवर्तन पछि रानी मा आफ्नो पूर्व युवा कोच द्वारा ट्रिगर गरे, उनले विला को एक अधिक मामूली अपार्टमेंट को लागि बदले र केयेन काले रंग को पुनरुत्थान प्राप्त गरे। तिनले यसो भने: "उनीहरूले यसो भनेका थिए कि म जीवनमा राम्रो चीजहरू मनपर्थ्यो, कि म एक ग्राफिक थिएन, जुन म (मोनाकोमा) मात्र उच्च वेतनको लागि आउनेछु, जुन यो मामला थिएन।"
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य:उनको नम्बरमा के छ?
बेकायकोले मोनकोमा नम्बर जेएनएमएक्सक्सको जर्सीमा खेल्यो। उहाँले यसलाई पेरिसमा 14th arrondisement (जिला) श्रद्धांजलिमा चयन गर्नुभयो जहाँ 14 अगस्ट अगस्त 17 मा आईभोरियन अभिभावकको जन्म भएको थियो, र चेल्सी को लागि एक नै संख्या पहिरन सक्नुहुनेछ।
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य:एक फ्यान Deschamps
फ्रान्स कोच Didier Deschamps बेकिओको प्रशंसा समाज को पूर्ण रूपमा भुक्तानी गरिएको सदस्य हो।
1998 विश्व कप विजेता कप्तान एक चीज वा दुई को अवधारणाहरु को बारे मा जान्छ जो एक महान खेलाडी बनाउन को लागी जान्छ। उनले बेकेको को युरोपबाट बाहिर मैनचेस्टर सिटी डम्पिङ गर्नको मुख्य भूमिका खेल्नु पर्ने एक हप्ता फ्रान्सेली टोलीमा सामेल हुन आग्रह गरे। त्यसपछि Deschamps यसो भन्नुभयो: "उहाँ हुनुहुन्छ शक्तिशाली, प्रभाव पार्छ, स्कोर निर्णायक लक्ष्यहरू, लक्ष्य बनाउँदछ र उत्कृष्ट सबै-गोलकर्ता हो। "
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य:उहाँको हेडर हुम्बले शहर
कहिलेकाहीँ म्यान्चेस्टर खेल खेल्दै स्टामफोर्ड ब्रिजमा आइपुग्छु, उनीहरूले मात्र हानिकारक हुन सक्ने क्षतिको बारेमा थाहा पाउनेछन्। इतिहासको लागि धन्यबाद।
मार्च मा फिर्ता, उनको शानदार हेडर 13 मिनेटले पेप गार्डियोोलाको सिटीलाई अन्तिम-एक्सएनएक्सएक्सबाट बाहिर जाने लक्ष्यलाई पछाडिको दुखाइमा पराजित गरेको थियो। 16-5 पहिलो-टाई जीत पछि टाईको नियन्त्रणमा सिटी प्रिन्सिपलमा आइपुग्यो। र3मिनेट जाने पछि, तिनीहरू अगाडि 19-6 थिए, केवल Bakayoko को लागि मोनको एक प्रसिद्ध विजय दिन थॉमस लेमरको फ्री-किकलाई घर फर्कन। "यो स्कोर मा एक ठूलो खुशी छ च्याम्पियन्स लिग। मैले यो अपेक्षा गरेन, " उसले भन्यो।
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य:किन चेल्सी एफसी उसलाई हस्ताक्षर गरे
सत्यले भन्नुभयो। तिनीहरूले उहाँलाई Mourinho को योजनाहरु देखि चोरी। विशेष एक उहाँलाई उहाँलाई माया गर्थे किनकि उसले आफ्नो विवरण भेट्टायो। (बलियो, शक्तिशाली र द्रुत)।
किन चेल्सी बेकेयोकोमा हस्ताक्षर गरियो
Tiemoue Bakayoko मैनचेस्टर यूनाइटेड को बिरुद्ध चेल्सी को चुना छ किनकी त्यो एन्टोनियो Conte को जोस Mourinho को पसंद गर्छन। उहाँले विशेष वनबाट पनि फोनहरू हटाउनुभयो जसले उसलाई निराश बनायो।
बेकेयको उनको चेल्सी मा उनको समय को समयमा भन्यो: "यो आश्चर्यजनक थियो कि Mourinho मलाई फोन गर्दछ, भले म तिनीहरूलाई सबैभन्दा मान्य तरिकामा अपील कसरी गर्नेछु भनेर पहिले चेतावनी दिएको थियो। मैले संयुक्त कदम चाल्नु पर्ने कारणको बारेमा मेरो तर्क सुन्नुभयो। उहाँले केहि कुरा कहिल्यै थाहा थिएन, मैले चेल्सी देखेको हुँ र त्यसलाई होइन। चेल्सीको लागि साइन इन गर्दै प्राकृतिक कुरा हो किनभने यो मेरो बचपनमा धेरै मनपर्ने क्लब हो। "
किन Mourinho Bakayoko खोल्यो
सायद जोस मोरोइनो र एन्टोनियो कन्टे बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाको अर्को कारण हो।
Tiemoue Bakayoko Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य:एक निजी विमान मा चेल्सी आगमन
Tiemoue Bakayoko मिल्यो चेल्सी फ्रान्सबाट लन्डनमा उडान गर्न सेट गरिएको एक निजी विमानमा एक तस्वीर पोस्ट गरेर उत्साहित प्रशंसकहरू। यो जेटले ब्लुजमा सामेल हुन लन्डनमा ल्याए। यो उनको चिसो संग एक चिकित्सा र हस्ताक्षर को अनुगमन गर्न को दौरा थियो।
बेकेयको चेल्सी एफसीको एक निजी विमानमा प्रवेश गर्यो
उनले सन्देशको साथ सन्देशलाई साथ दिए: "विमान, चलो जानुहोस् ... म चाल्से एफसी संग राम्रो हफ्ते हुन सक्छु" साथमा विमान इमोजिसको जोडी।
फेब्रुअरी 19, 2018